Dowlada Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay hub & xubno Shabaab ah - Awdinle Online
Dowlada Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay hub & xubno Shabaab ah
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya gaar ahaan qeybta 21aad ayaa howlgal qorsheysan waxaa ay ka fuliyeen duleedka Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug.
Howlgalka ayaa waxaa uu ka dambeeyay kadib markii xalay weerar hoobiyeyaal ah lagu qaaday Magaalada Dhuusmareeb, waxaana la sheegay in intii uu howgalka socday uu dagaal kooban dhex-maray ciidamada dowladda & Xubno ka tirsan AL-Shabaab.
War kasoo baxay taliska Ciidamada qyebta 21aad ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada ay toogteen mid kamid ah raggii weerarka hoobiyeyaasha ahaa ku qaaday Magaalada Dhuusamareeb halka mid kale isaga oo dhaawac ah ay qabteen.
Sidoo kale taliska Ciidamada qeybta 21aad waxaa ay sheegeen in howlgalkaas lagu qabtay hub ay lahaayeen Al-Shabaab wallow aysan shaacin tirada hubkaasi inta uu la egyahay.
Tan iyo markii isbedelka Maamul uu ka dhacay degaannada Galmudug ayaa waxaa kusoo kordhay falal amni darro oo ay kamid yihiin weerarada Al-Shabaab iyo dagaalada dhex-maraya labada maleeshiyo Beeleed.
Previous articleMadaxweynaha Jubbaland oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb
Next articleDhacdo sababtay dhimasho & dhaawac oo ka dhacday Walanweyn